UID Key ကို Chain, UID Key Rings, UID Epoxy RFID Keychain, UID Fobs, UID Keychain, UID Epoxy Keychain,0Sector Can Rewritten UID Card, UID Can Copy Card,0Sector Can Rewritten UID Keychain, UID Can Copy Key rings,0Sector Can Rewritten UID Key rings, UID Can Copy Key chain
UID Key ကို Chain,0ကဏ္ဍက Can ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး UID Key ကိုလက်စွပ်
protocol စံ: ISO / IEC 14443A
R / W ကိုအကွာအဝေး: 2.5~ 10cm (အဆိုပါအင်တင်နာအရွယ်အစားနှင့်ကဒ်စာဖတ်သူကိုနှင့်ဆက်စပ်သော)
ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ: ကို ABS, 0.13 ကြေးနီဝါယာကြိုး
Keychain surface can be silk screen or laser engraving patterns, လိုဂို, ID number, QR ကုဒ်ကို,စသည်တို့ကို.
3, ပိတ်ဆို့0directly using ordinary MIFARE reader modify, do not need special equipment.
4, the default password of the chip is 12 F ကို, ie FFFFFFFFFFFF.
အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, ကားရပ်ခြံ, certification, attendance management, ထုတ်ကုန်ဖော်ထုတ်ခြင်း, စသည်တို့ကို, in residential quarters, offices, စက်ရုံတွေ, ကျောင်းများ, hospitals and other non-contact IC card applications.
I am interested in your product UID Key Chain,0ကဏ္ဍက Can ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး UID Key ကိုလက်စွပ်
prev: 125kHz နံပါတ် Writable Keychain, ID ကို Blank က Writeable Code ကို Key ကို Fobs
နောက်တစ်ခု: RFID လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Key ကို Ring ကို, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Keychain